www.fipoh.se - Websiyo kale! - andra hemsidor
Ungas egna stories
Läs mer på andra hemsidor!
Tryckt flerspråkigt infomaterial
Folders iyo qoraallada - Tryckt flerspråkigt infomaterial
Websiyo kale! - andra hemsidor
Sheekooyinka dhalinyarda - Ungas egna stories
وب سایت های دیگر Andra hemsidor
جزوات Tryckt material
عربى - Arabiska
قصص الشباب Ungas stories
مواقع أخرى - Andra hemsidor
كتيبات Tryckt material
SIDEE AAN KU RAADSADAA DARYEEL CAAFIMAAD?
Haddii aadan caafimaad ahaan fiicneyn waa muhiim aad taas daryeel caafimaad u raadsatid. Waxaa jira siyaabo kala duduwan oo aad caawimaad ku heli kartid. Halkan waxaad ka heleysaa boosas fiicfiican oo leh macluumaad ku aaddan sida aad daryeel caafimaad u raadsan kartid:
Wac 112 haddii ay jirto xaalad adag oo degdeg ah!
112 waa nambarka xaaladaha adag ee degdegga ah ee Swiidhan. Halkaas ayaad habeen iyo maalinba u wici kartaa, si lacag la’aan ah, haddii aad ku jirtid xaalad adag oo degdeg ah. Taas wey khuseysaa xitaa haddii adiga ama qof kale uu si aad u xun u dareemayo wacnaan la’aan aad u daran taasoo xaaladda ka dhigeysa mid xun oo degdeg ah.
1177 waa hagaha caafimaadka guud ee Swiidhan.
Waxaad habeen iyo maalinba wici kartaa 1177 haddii aad su’aalo qabtid, una baahantihid talo ama caawimaad.
Waxaad wici kartaa haddii aad adiga naftirkaagu xanuunsantihid ama cid kale.
Markaas waxaad la hadli kartaa qof kuu sheegaya daryeelka caafimaadka ee aad u baahantihid waxa uu yahay.
Waxaad sidoo kale ogaaneysaa meesha rugta caafimaad ama rugta qaabilaadda xaaladaha degdegga ah ay ku taallo.
Haddii aadan ku hadlin ama aadan si fiican u fahmin swiidhishka waxaad weydiisan kartaa turjumaan.
Waxaad sidoo kale geli kartaa www.1177.se si aad u heshid macluumaad dheeraad ah.
Waa kanaa isku xire ku aaddan macluumaadka 1177 oo luqado kala duduwan ah.
Ka akhriso youmo.se
Youmo.se waa bogga intarneetka ee qaabilaadaha dhallinyarada ee loogu tala galay dadka waddanka ku cusub.
Bogga intarneetka ayaad ka heli kartaa macluumaad urursan oo ku aaddan sida aad daryeel caafimaad u raadsan kartid.
Waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad ku aaddan galmada, jeceylka, jirka, khamrada iyo wax kale oo badan oo dheeraad ah.
Meesha ugu sarreysa ee bogga waxaad ka dooran kartaa haddii aad dooneysid in aad luqadda beddelatid.
Wac khadka caawimaadda ee Badbaadi carruurta (Rädda barnens hjälplinje)
Badbaadi carruurtu waxay leeyihiin khad caawimaad oo aad wici kartid haddii aadan fiicneyn.
Kuwa halkaas ka shaqeeya waxay ku hadlaan luqado kala duduwan.
Nambarku waa 0200–77 88 20, khadkuna wuxuu maalmaha oo dhan furanyahay saacadaha 15.00-18.00.
Wicitaanku waa lacag la’aan waana leys qarin karaa
Haddii aad dugsi dhigatid waxaad mar walba la xiriiri kartaa Caafimaadka ardayda ee dugsiga.
Halkan waxaad ka daawan kartaa filin ku aaddan caafimaadka ardayda.
Filmaanta waxaa lagu daawan karaa luqado kala duduwan.
MACLUUMAAD KALE OO LUQADO FARA BADAN AH
Halkan waxaad ka heleysaa isku xire ku aaddan dhawr meelood oo barta intarneetka ah oo leh macluumaad luqado kala duduwan ah.
Youmo – Qaabilaadda dhallinyarada ee luqadaha faraha badan
Abriil 2017 waxay Qaabilaadda dhallinyaradu suuqa soo gelisay boggeeda cusub ee aadka u fiican ee youmo.se
Waxaad isaga ka akhrisan kartaa, kana daawan kartaa filin ku aaddan jirka, caafimaadka, jeceylka iyo galmada oo ah luqadaha caadi ahaan ay leeyihiin dhallinyarada ku cuscusub Swiidhan.
Talooyinka wanwanaagsan ee FARR
FARR waa urur sanooyin badan ka shaqeynayay arrimaha megengelyo doonka iyo xuquuqda dadka aan waraaqaha lahayn. Qoraalkooda Talooyin wanwanaagsan waxaad ka heli kartaa macluumaad aad u wanaagsan haddii aad tihid megengelyo doon ama warqado laaway. Qoraalku wuxuu ku qoranyahay luqado fara badan oo kala duduwan.
Si lacag la’aan ah ayaad pdf ahaan uga soo degsan kartaa.
Bog intarneet oo fiican oo luqado kala duduwan oo fara badan ah, oo leh macluumaad bulsho oo wanwanaagsan oo loogu tala galay adigaaga Swiidhan ku cusub.
MUCF ku aaddan xuquuqda dadka HBTQ-ga ah
Hey’adda dhallinyarada- iyo arrimaha bulshada (MUCF) waxay soo saartay nuqul ku aaddan xuquuqda dadka HBTQ-ga ah.
MUCF waa hey’adda dowladeed oo soo saarta aqoon ku aaddan duruufaha nololeed ee dhallinyarada.
Tyfons Buuga hagida awooda
“Tyfon” (Dufaan waa waa koox loogu talagalay dhalinyarada ee waayo-aragnimo u leh socdaalka iyo qaxootinimada. Waxaan rabna si wadajir ah in aan hawla kala duwan ku saleeysan barashada siyaasadda) ayaa sameeyay “buuga hagida awooda” oo lagu talagalay in loo istacmaalo qalab abaabuleed. Waxaan rabnaa in aan bulshada la wadaagno aqoonta aan leenahayn si dad badan ay u dareemaan faraxadda iyo xiisaha uu leyahay abaabulka siyaasada.
Materialet på denna är licenserat med (CC BY-NC-ND) Creative Commons Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar. Detta innebär att vi tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna oss som upphovsman